Imeko imaxongo kwisikolo samabanga aphakamileyo e Hermanus – Elitsha
15th May 2018 Phinda KulaCape Town, Ezemfundo, Iyavela 0 Xhosa
Abafundi base Qhayiya beqhanqalaza ngaphandle kwesikolo. Umfanekiso uthathwe ngu Phinda Kula
Imeko imaxongo kwisikolo samabanga aphakamileyo iQhayiya kwilokishi yaseZwelihle, Hermanus. Oku kulandela uthotho lwezityholo zodlwengulo ezijoliswe kubafundisi-ntsapho ngabafundi.
Kungokunje omnye umtyholwa ongutishala uselugcinweni lwamapolisa nekulindeleke afake isicelo sebheyile kwinkundla kamantyi eHermanus ngomhla weshumi elinesixhenxe kule iphezulu. Umtyholwa ujamelene ngezityholo zokuxhwila, ukudlwengula kwanokukhomba ixhoba ngomkhonwekati. Ixhoba lineshumi elineseibhozo leminyaka ubudala. Usapho lwexhoba lalile ukuphefumla ngalenyewe lisithi lixhalabile yaye beliyalelwe ngonontlalo-ntle lingaphosi zwi kwintatheli kuba oko kungabangela ukonakala kwelityala.
Ngethuba abazali beqhanqalaza phambi kwelaziko lemfundo kunyanzele ukuba inqununu isindiswe ngamapolisa nathe azame ukuyibalekisa ngelisindisa ubom bayo. Amarhe adiza ukuba ayizikuwuthi cakatha umcondo wayo esikolweni intsukwana ezimbalwa. “Abantwana bethu sicinga ukuba bakhuselekile xa besesikolweni kanti bahleli namarhwanca” utshilo ongumzali uFikiswa Mangali. Abafundi bathi baziva bengakhuseleka kuba esi ayisosiganeko sokuqala nabadiza ukubandakanyeka kwenqununu ngelithi nezinye iziganeko ezikumila kunje zaphelela emoyeni.
Kungokunke isebe lemfundo eNtshona-Koloni lithi linikezela ngenkxaso ngaxhoba kwezizityholo. Ukanti ziwe phantsi inzame zeElitsha ukufumana ingxelo malunga nalombo kwibhodi ejongene nolawulo lwesikolo.
Isithethi samapolisa eNtshona-Koloni uFrederick van Wyk uthi kuqhutywa uphando kwezizityholo ngakumrhanelwa onamashumi amane anesihlanu eminyaka ubudala. Oku kwehla kanye ngexesha labafundi abajonge ukuchophela iimviwo zesiqingatha sonyaka.
Udlwengulo nempatho mbi